Umhla My Pet » 4 Imikhwa enamandla konwatyiwe Ubudlelwane
ukubuyekezwa: Dec. 02 2020 | 2 min ukufunda
Ngaba wakha ixesha lokucingisisa phezu indlela iipateni zakho ukuziphatha bakho kubomi uthando ngcono okanye mandundu? Kukho izinto ntoni engaqondanga ukuba nefuthe ulwalamano lwakho ngendlela entle, kanye njengoko kukho abathile nquleqhu eyaba ezinye uhlobo uhlobo lwesibini kuwe, kodwa drive zepistasi lakho iqabane. Ngoxa abo bokuqala ziyekeni, usenokucinga ukubatshabalalisa kuhlobo lwesibini imikhwa kwaye basebenzise ezinye izenzo kuphela nolwalamano kuphumelela ukuba ibe ngumkhwa.
1. Ukunyanga iqabane lakho ngentlonipho
Nentlonelo njengempembelelo ubuhlobo kufuneka, enoba sithetha malunga abadyiwazi kwisikolo esiphakamileyo, Eme ubusuku enye okanye ukuthandana nje. Ukuphatha iqabane lakho ngentlonipho uba kubaluleke kakhulu xa tshata, ingakumbi xa ufuna ukuba ube umtshato ubomi oluhlala. Ukuba nembeko abalinganayo ukuze ekuboniseni uthando, kanye njengokuba zokunganyangi iqabane lakho ngentlonipho lithetha ukuveza sizibaxa yakho, ukusilela kwenu trust okanye ukwamkeleka.
Nokuhlonipha iqabane lakho kuthetha ukuwenzela uyabathanda kuba abo. ngamana baneembono ezahlukeneyo ngobomi, kodwa oku akuthethi ukuba unelungelo nantlonelo him / her. Le yinto kufuneka sikhumbule ingakumbi xa ababini kuni baxabana into. imilo, nokuba abo eyona ingabalulekanga, la mathuba xa izibini basoloko bakulibale wayelumkisa iqela kwaye kufuneka baziphathe hlobo.
2. Yiya kuba ibanjwe ngesandla
Lo mkhwa kuya kuba nefuthe elikhulu kwindlela ovuke, impilo yakho ngokunjalo ulwalamano lwakho. Yinto ithuba ukufumana umthambo ngaphambi okanye emva kosuku ungenzi nto kwi-ofisi kunye nethuba ukuchitha ixesha esemgangathweni isibini. isandla Ukuhamba esandleni likwaphumeza incoko nice njengoko ixesha uphumelele bazishiye ekhaya bakho ngemihla nesicacileyo intloko yakho kunye.
3. Chithani ngokuhlwa ndawonye kude TV
Ubukele iTV kusenokuba yenye yezona ethandwayo (ukuba eyona zonke) umsebenzi ngexesha abangenzi nto, kodwa ngokuqinisekileyo akuyi kukunceda njani njengoko isibini. UMaSukude okunene itsalela yonke ingqalelo, akaziphathi ngesiciko nonxibelelwano. Njani mhlawumbi nawe ukudibanisa omnye nomnye lo gama ubukele umabonwakude? Njani ngokucima TV (ubuncinane amaxesha ngamaxesha), aze achithe ixesha esemgangathweni isibini? Nisenokuthetha usuku, unga snuggle esofeni, khumbula umhla wakho wokuqala okanye ukucwangcisela iholide yakho elandelayo. Nantoni igxininisa babini kuni uya.
4. Bakhahlela ndimkhuphile iqabane lakho
Njani ukuba ningambuyisi ikofu indoda yakho kusasa? Okanye kubiza unina yeresiphi ukupheka kwisitya enaniwathanda xa nanisengabantwana? Njani ukuthenga nentombi yakho cake yakhe ayithandayo? Okanye ibe ngcono, kugcade ngenxa yakhe? Akunyanzelekanga ukuba ibe yinto enkulu. izijekulo ezincinane intle ukuchaza iimvakalelo zakho uthando nentlonelo. Ukushiya amanqaku ngamnye okanye ndibhalela ukuthi uphosa him / her kanye ngeli Imikhwa ezinokuba nefuthe ngendlela entle ulwalamano lwakho.